Waxaa Maanta Aas-Qaran Lagu Xabaalay Suldaan Buzeri Sul.Nimcaan Magaalada Jigjiga. - Cakaara News
Waxaa Maanta Aas-Qaran Lagu Xabaalay Suldaan Buzeri Sul.Nimcaan Magaalada Jigjiga.
Allaha unaxariistee Suldaan Busayri Suldaan Nimcaan Suldaan Sheekh Xasan oo shalayto oo arbaca ah ku geeriyooday isbataal ku yaala Magaalada diredhaba ayaa maanta barqadii lagu aasay qabuuraha sheekh Cali Guure ee magaalada jigjiga. Masuuliyiinta ugu saraysa dawlad deegaanka soomaalida itoobiya iyo dadweyne aad u tira badan ayaa ka qayb galay aaska iyo salaada janaasada ee marxuum suldaan Busayri Suldaan Nimcaan Suldaan sheekh xasan.
Madaxweynaha dawlad deegaanka soomaalida itoobiya oo ay wahelinayaan sadexda madaxweyne ku xigeen,afhayeenka baarlamanka dawlad deegaanka soomaalida itoobiya mudane Maxamed Rashiid isaaq,Gudoomiyaha Maxkamada Guud iyo Madaxa hanti dhawrka guud ee deegaanka soomaalida itoobiya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukumada DDS ayaa goob joog ahaa oo kala qayb galay aaska marxuumka dadweynaha tirada badan ee isugu yimid aaska saaka barqadii . Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa u tacsiyeeyay qoyska iyo ehelada iyo dhamaan shacab weynaha deegaanka soomaalida ee uu ka geeriyooday marxuum suldaan busayri suldaan nimcaan suldaan sheekh Xasan.
Dhanka kale isla goobta aaska waxa lagu doortay oo loo caleemo saaray suldaanimada beesha wiilka kaliya ee uu ifka uga tagay Suldaan busayri Suldaan Nimcaan Sheekh Xasan oo lagu Magacaabo Suldaan Maxamed Suldaan Busayri Suldaan Nimcaan Sheekh Xasan.
Sida uu sheegay madaxwaynaha deegaanka Soomaalida ee dalka itoobiya waxa la qaban qaabin doonaa munaasabada caleemo saarka Suldaanka cusub maalmo kadib tacsida suldaanka geeriyooday. Waxa si kooban looga waramay taariikhda suldaanka waxana halkaasi ka soo jeediyay hadalo kooban oo ku saabsan taariikhda marxuumka Maxamed Aw Aadan ‘Yeeke’ oo kamida caaqilada beesha isaga oo sheegay in marxuumku uu ku dhashay jigjiga islamarkaana uu tacliinta sare ku soo qaatay dalka soomaaliya ahaana duqii ugu horeeyay ee soomaaliya ee qabta xilka magaalada jigjiga tan iyo markii isbadalka cusub uu ka dhacay dalka itoobiya.
Marxuumka oo godka la dhigay saacada Afrikada bari markii ay ahayd 10;45 daqiiqo ayaa si wada jir ah loogu duceeyay waxana halkaasi muxaadaro diini ah ka soo jeediyay Sheekh Axmed Aabi oo kamida Culimada deegaanka soomaalida.
Guurtida Odeyaasha dhaqanka ee deegaanka soomaalida itoobiya iyo guud ahaan waxgaradka deegaanka soomaalida itoobiya ayaa tacsi u diray beesha suldaanku uu hogaanka u ahaa iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyaga oo ilaahay uga baryay marxuumka in uu geeyo janadii fardawsa.